Sakano, fantaro ary hadino ny lahatsoratra amin'ny TextGrabber, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Na dia hatramin'ny mbola kely aza ny ray aman-drenintsika dia nilaza taminay foana fa zava-dehibe ny fahalalana Anglisy, nandritra ny taona maro ary miankina amin'ny asa vitantsika na ny asa nianarantsika, dia mety tena safidy na adidy ny anglisy. Saingy tsy ny olon-drehetra no nanana na nanana fotoana na vola hianarana fiteny hafa. Soa ihany fa afaka mampiasa fampiharana izay mamela antsika handika lahatsoratra an-tsoratra amin'ny fiteny hafa isika. TextGrabber dia iray amin'izy ireo izay manome antsika andraikitra telo amin'ny iray: scans, mamantatra lahatsoratra ary avy eo mandika azy amin'ny fiteny 100 mahery.
Ity rindrambaiko ity dia manana vidiny 2,99 euro mahazatra fa mandritra ny fotoana voafetra izay mamela antsika scan sy hahafantatra ilay lahatsoratra fotsiny. Raha irintsika Raha hampiasa ny fandikan-teny dia tsy maintsy mandeha any amin'ny mpividy vola isika ary mandoa 3,99 euro. Ny tombony tokana omeny antsika raha tsy te-handalo ny fizahana handikana ny lahatsoratra isika dia ny manafaka sy mametaka azy amin'ny mpandika teny Google ary mamonjy ny vola 3,99 euro amin'ity asa ity.
Ny fanekena ny kaody sy ny kaody QR amin'ny fiteny maherin'ny 60 ao anatin'izany ny Espaniôla, Anglisy, Alemanina, Italiana, Frantsay, Portigey, Rosiana, Sinoa, Japoney ...
Izy io dia mahay mandika lahatsoratra amin'ny fiteny mihoatra ny 100, izay mila fifandraisana Internet maharitra.
Fahafahana maka tahaka sy mametaka ireo lahatsoratra zara raha misy ary voadika amin'ny fampiharana hafa.
Azontsika atao ny mamoaka ny fandikana amin'ny Facebook, Twitter ary Evernote avy amin'ny fampiharana
Mikaroha ny lahatsoratra voadika amin'ny Internet.
Tehirizo amin'ny iPhone ny sary an-tsoratra
Ny lahatsoratra voasambotra rehetra dia voatahiry ao anaty fampirimana tantara, tantara izay azo sokafana sy ovaina amin'ny fotoana rehetra arak'izay ilaintsika.
Vakio ireo lahatsoratra maimaim-poana, misaotra an'i Voice Over.
Ny haben'ny endritsoratra dia afaka miovaova ho an'ny olona manana olana amin'ny fahitana.
TextGrabber - Mpandika fakan-tsarymaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Sakano, fantaro ary hadino ny lahatsoratra amin'ny TextGrabber, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
iOS 10.3 dia hanana maody maizina vaovao
Kanex dia manolotra GoPower, toby fiantsenana hafa ho an'ny Apple Watch, keychain tafiditra ao